Posted by Tranquillus | Feb 8, 2021 | Xirfadaha hadalka iyo qoraalka afka
Marka ay timaado qorista, waxaad runtii la kulantaa walaac aad u baahsan. Laakiin maanta waxba kama tari kartid laakiin qor. Taas bedelkeeda, qoristu waa iska cadahay. Si kastaba ha noqotee, had iyo jeer ma fududa inaad si sax ah u qorto waxaad rabto inaad muujiso. In la fahmo madmadow la'aan iyo xulashada ereyada saxda ah waxay u baahan tahay khibrad.
Si ka duwan hadalka, ee noogu yimaadda si dabiici ah maalin kasta, qoristu ma aha geedi socod lagu dhasho. Qoraalku wali waa ku adag yahay dad badan, maadaama aad caadi ahaan keli ku tahay bog madhan, kan kaliya ee ogaanaya natiijada la doonayo. Qoraalku haddaba waa mid cabsi leh; cabsi ka timid la'aanta xirfadaha qorista. Markaad tixgeliso raadadka qofku ka tago inta uu qorayo, wuxuu ka baqayaa inuu ka tago tilmaamo diidmo ah, oo khatar noqon kara.
In wax la qoro waa in la jiifiyaa indhaha dadka kale hortooda
Isaga oo qoraal ku muujiya, « nafteena ayaynu is muujinnaa, waxaan qatar u nahay inaan kan kale siino muuqaal aan dhammaystirnayn oo nafteena ah ". Su'aalo aad u tiro badan ayaa soo baxa oo aan inta badan isku dayno inaan ka jawaabno: Ma si sax ah ayaan wax u qorayaa? Dhab ahaan miyaan qoray wixii aan damacsanaa inaan muujiyo? Akhristeyaashaydu ma fahmi doonaan waxa aan qoray?
Cabsi joogta ah oo joogto ah oo ku saabsan sida qofka qaata uu u arki doono qoraalkeena. Miyuu si cad u heli doonaa farriintayada? Sidee buu u xukumi doonaa oo u siin doonaa isaga dareenka muhiimka ah?
Qaabka aad wax uqorto ayaa ah mid kamid ah qaababka aad waxbadan uga baran karto naftaada. Taasina waa inta badan kuwa bilaabaya khibrada qorista. Aragtida dadka kale ee ku saabsan wax soo saarkeena. Xaqiiqdii, waa waxa ugu horreeya ee annaga na dhibaya, iyada oo loo oggol yahay cabsidan caalamiga ah ee ay cabiraan dadka kale, si loo falanqeeyo ama loo dhaleeceeyo. Immisa naga mid ah ayaa soo qaatay cilladda "bogga maran" si ay u muujiyaan caqabadaha naga hortaagan helitaanka fikradaha ama dhiirrigelinta? Ugu dambeyntiina, carqaladdan ayaa inta badan ku soo baxda baqdin, cabsi ah "in si xun wax loo qoro"; si lama filaan ah, cabsidan aan ogaal la’aanta ugu muujineyno qaladaadkeenna akhristayaasha.
Inbadan ayaa ah kuwa lagu calaamadeeyay xirfadooda iskuulka. Laga soo bilaabo dugsiga hoose ilaa dugsiga sare, dhammaanteen waxaan ka wada qayb qaadannay qormooyin, curisyo, qormo, qormo, sharraxaad qoraal, iwm. Qoraalku wuxuu had iyo jeer udub dhexaad u ahaa waxbarashadeenna; qoraalladeennu guud ahaan way akhriyaan, saxayaan, mararka qaarkoodna macallimiintu way ku qoslaan.
Iska iloow wixii hore si wanaagsan inaad wax u qorto
Qaangaar ahaan, waxaan badanaaba dareemeynaa cabsidan ah in nala akhriyo. In kasta oo ay muhiim tahay inay naga dhigto wax akhrin, haddana waxay u badan tahay inay nagu adag tahay in la saxo, wax laga faaloodo, la faafiyo, lagu jees jeeso. Maxay dadku aniga iga oran doonaan markaan akhriyo qoraalladayda? Sawir noocee ah ayaan siin doonaa akhristayaasha? Sidoo kale, haddii akhristaha uu madax ii yahay, sidoo kale waxaan ka sii fiicnaan lahaa inaan iska ilaaliyo in aan is muujiyo oo aan oggolaado cidda aan ahay. Tani waa sida qoristu wali cabsi u tahay markaad ka shaqeyneyso shirkad.
In kasta oo xaqiiqda ah in wax qorista meheraddu ay cabsi badan ku tahay dad badan, waxaa jira xalal. Waa inaan "iska" joojino qorista sida lagu baray dugsiga. Haa, tani gabi ahaanba waa iska horkeen, laakiin waa run. Ku qorida meheraddu shaqo kuma laha qorista suugaanta. Uma baahnid inaad karti yeelato. Marka hore, si buuxda u faham sifooyinka iyo caqabadaha qoraalka xirfadeed, hababka iyo xirfadaha qaarkood, gaar ahaan ku dhaqanka. Kaliya waxaad ubaahantahay inaad marto nidaamkan qoristana mar dambe ku cabsi galin meyso.
Maxaa sharxaya cabsida qoraalka? 5-Maarso, 2021Tranquillus
horeLacag kaga hel internetka 10 ganacsi oo la bilaabayo sanadka 2021
socdaIlmaha jiran: shaqaalahaagu xaq ma u leeyahay maalmo fasax oo cayiman?